कोरोना नि’यन्त्रण बाहिरः ठाउँ-ठाउँमा सिल, कतै तपाईंको स्थान त परेन ? – Jagaran Nepal
कोरोना नि’यन्त्रण बाहिरः ठाउँ-ठाउँमा सिल, कतै तपाईंको स्थान त परेन ?
काठमाडौँ । टेकु, महाबौद्ध र न्यूरोड क्षेत्र सिल गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अधिकारीबीच बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यस्तै, नागरिकता र पासपोर्ट वितरण कार्य समेत बन्द गर्ने जनाइएको छ । यी तीन जिल्लामा संक्रमण देखिएका सबै ठाउँ सिल गर्ने बैठकले जनाएको छ ।
बैठकको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने भएको छ । यस्तै, तीन वटै जिल्लामा रहेका क्वारेन्टिन र आएसोलेसन पनि थप सुरक्षित बनाउने जनाइएको छ ।काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै थप १०६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।काठमाडौंका ८८ जना, भक्तपुरका ८ जना र ललितपुरका १० जना गरी कुल १०६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँका मुख्य व्यापारीक क्षेत्र समेत सिल गरिएको हाे । शुक्रबार मात्रै महाबौद्धका थप तीन व्यापारीमा संक्रमण देखिएको छ ।बैठकका अनुसार आज मध्यरातबाट उक्त क्षेत्र सिल गरिने भएको छ । काठमाडौँमा मात्रै दिनहुँ दर्जनौँ संक्रमित फेला परिरहेका छन् । जसले काठमाडौँ जोखिममा रहेको पुष्टि भएको छ ।
यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४६४ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या २२ हजार दुई सय १४ पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेसः
सरकारले जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा नागरिकलाई पनि सुरक्षाको उच्च सतर्कता अपनाउन गरेको निर्देशन र संक्रमितको अवस्थालाई हेरेर यो निर्णय गरिएको दाहालले बताउनुभयो ।